Iibso Kaabsoosha Kaabsoosha Kaabsoosha Kalluunka Dabiiciga ah ee Hydrolyzed Saafiga ah - Rarista bilaashka ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Nooca Shayga: Kareemada Dhimista Miisaanka
Collagen waa borotiin -dhismeedka asaasiga ah ee laga helo unugyada isku -xirka ee jirka, oo ay ku jiraan maqaarka, lafaha, carjawda, seedaha, iyo seedaha. Laakiin gabowga, kolajka dadka u gaarka ah ayaa si tartiib tartiib ah u lumaya, waxaan u baahanahay inaan xoojinno oo aan ilaalino caafimaadka iyadoo la raacayo nuugista ka timid kolajka aadanaha.
Collagen waxaa laga soo saari karaa Maqaarka ama Gristle kalluunka badda cusub, Bovine, Porcine, iyo Chicken, oo ah qaab budo ah, sidaa darteed waa mid aad loo cuni karo.
Qaado farsamooyin kala duwan, waxaa jira Collagen Hydrolyzed, Collagen Active, Collagen Peptide, Gelatin, iyo wixii la mid ah.
Collagen waxaa gebi ahaanba laga soo saaraa miisaanka kalluunka cusub iyo hargaha kalluunka. Kolajka kalluunka ayaa laga helaa codsiyo ballaaran xagga caafimaadka Cuntada, qurxinta, iyo warshadaha dawooyinka.
Magaca badeecada: Pkolajka kalluunka ureydka lagu shubay 99%
Magaca Laatiin: Collagen Collagen Oligopeptides
Tirada: 100 kaabsoosha
Maaddooyinka firfircoon: Kolajka kalluunka ee saafiga ah
Cabbirka u adeega: 2 kaabsoosha
Hawlaha ugu waaweyn:
Qoyaanka wax -ka -beddelka: Kolajka kalluunka wuxuu si xoog leh u nuugi karaa biyaha hawada wuxuuna u samaysan karaa qolof qoyan si uu u qallajiyo qoyaanka, maadaama uu leeyahay kooxo badan oo biyo -mareen ah.
Caddaynta: Kolajka kalluunka ayaa laga yaabaa inay ka hortagto in tyrosine -ku u turjumto melanin, ka takhalusto xagjirrada xorta ah ee jirka, oksijiinta ka hortagga, kor u qaadista dheef -shiid kiimikaadka, dib u dhigto gabowga unugyada. Markaa waxay maqaarka bani -aadmiga ka dhigi kartaa mid jilicsan, dhererkiisuna yahay dabacsanaanta, oo sida cad cad.
Ka -qaadista laalaabkii: Cilmi -baadhistu waxay muujinaysaa in gabowga maqaarka, luminta dabacsanaanta iyo dhalaalka, samayska duudduubku ay sababto hoos -u -dhac ku yimaad hydroxyproline oo leh gabow. Sababtoo ah waxaa ku jira hydroxyprolines fara badan, isku -darka kalluunka ayaa bixin kara alaab ceyriin ah oo loogu talagalay isku -darka kolajka, sida iska cad dib u dhigidda dareenka maqaarka iyo yareynta laalaabkii.
Ka saarida bararka: Maqaarka dufanku wuxuu qariyaa dufan badan oo u horseeda koritaanka blain. Kolajka kalluunka ayaa laga yaabaa inuu si toos ah u dhex galo cutis si uu u siiyo qoyaan, u kordhiyo heerka haynta biyaha maqaarka dhowr jeer, sidaa darteed dheecaanka dufanka laftiisa ayaa hoos u dhacaya. Waxa kale oo ay siisaa asiidhyo amino ah dheef -shiid kiimikaadka maqaarka, waxay ka dhigtaa unugyada inay yeeshaan shaqo dib -u -soo -nooleyn, si ay u gaadho saamaynta ka -qaadista bararka.
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 29
helay Waa hagaag. Waa hagaag. Waa amarkii labaad. Muddo ayay ahayd.
Alaab aad u fiican Mahadsanid. Mahadsanid.